जापान–नेपाल सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्‍याउन प्रयत्नशील रहनेछु : जापानी राजदूत किकुता (अन्तर्वार्ता) - Mardi News Mardi News
जापान–नेपाल सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्‍याउन प्रयत्नशील रहनेछु : जापानी राजदूत किकुता (अन्तर्वार्ता)
युताका किकुता नेपालका लागि जापानी नवनियुक्त राजदूत हुन्। जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कूटनीतिज्ञ किकुता हालै नेपालका लागि राजदूत नियुक्त भएका हुन्।
यसअघि उनी नाइजेरियाका लागि राजदूत थिए। त्यो भन्दाअघि उनले भुटानमा डेपुटी चिफ अफ मिसन र सन २०१५ मा भारतमा पनि डेपुटी चिफ अफ मिसनका रुपमा रहेर काम गरेका थिए।
यसअघि थाइल्यान्ड, नेदरल्यान्डलगायतका देशमा रहेका जापानी मिसनमा रहेर काम गरेका अनुभवी कूटनीतिज्ञ किकुता हालैमात्र नेपालका लागि जापानी राजदूतमा नियुक्त भएका हुन्। प्रस्तुत छ उनीसँगको राससका सोमनाथ लामिछाने र एकराज पाठकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
महामहिम राजदूतज्यू, नेपाल र जापानबीच जनस्तरमा र सरकारीस्तरमा पनि विगत लामो समयदेखिको निकै सुमधुर सम्बन्ध रही आएको त यहाँलाई विदितै छ। यो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनका लागि यहाँले आफ्नो कार्यकालमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ?
सबैभन्दा पहिला त नेपालजस्तो देश जहाँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ र जहाँका नागरिकले ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने मान्यतालाई अघि सार्ने गर्दछन, यस्तो देशको राजदूतका रुपमा नियुक्त हुन पाउँदा मलाई निकै खुशी लागेको छ। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ का लागि म नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकसँग आगामी दिनमा सहकार्य गरेर अघि बढन चाहन्छु।
हो, नेपाल र जापान निकै लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्ध र असल मित्रका रुपमा अघि बढिरहेका छन् जुनकुरा म एकछिनमा बयान गर्नेछु। नेपाल र जापानबीचको सम्बन्धमा त मेरो दिमागमा पनि कतिपय अविस्मरणीय क्षणहरु पनि छन्। यस्तो सम्बन्धको जगमा रहेर यसलाई थप प्रगाढ बनाउनका लागि म पनि मेरो कार्यकालभर प्रयत्नशील रहने छु। मेरो यस्तो रणनीति छ कि म यहाँ रहुञ्जेल मैले धेरै भन्दा धेरै नेपाली नागरिक, नेपालका उच्चस्तरीय नेता, उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेट तथा अन्तक्रिया गर्नेछु। त्यसैगरी सम्भव भएसम्म म नेपालका धेरैभन्दा धेरै स्थानको भ्रमण पनि गर्नेछु।
व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने मेरो गृहनगर जापानको फुकुशिमा हो। सन् २०११ मा जापानमा आएको महाभूकम्प र सुनामीले गर्दा त्यहाँको तोहोकु क्षेत्रलाई निकै क्षति पुगेको थियो। त्यस समयमा हाम्रो दुःखमा हामीप्रति सहानुभूति राखेर हाम्रा लागि नेपाली नागरिकले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। त्यसैले म व्यक्तिगत रुपमा यसका लागि नेपाली नागरिकप्रति कृतज्ञ छु।
तपाईं पनि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि मार्च महिनामा त्यस क्षेत्रमा निकै चिसो हुन्छ। त्यस्तो आपतका बेलामा मेरा आमाबुबा, मेरो परिवार र आफन्तजन एवं त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जापानी नागरिकहरु चिसोले निकै दुःख पाएका थिए। उनीहरु खाना, विद्युत, ग्यासलाइन विहीन भएर बस्नुपरेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा नेपालले पाँच हजार ब्लाङकेट सहयोग स्वरुप त्यो क्षेत्रमा पठाएको थियो। यसबाट त्यहाँका हजारौँ नागरिकको ज्यान बचेको महसुस हामीले गरेका छौँ। त्यस्तो अप्ठेरो बेलामा नेपालीले पकाएर दिएको दालभात तथा तातो कफीले उनीहरुलाई बाँच्न ठूलो सहायता पुगेको थियो।
त्यसपछि नेपाली नागरिकले सन् २०१६ को अप्रिलमा जापानको कुमामोतोमा गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई दालभात पकाएर खुवाएका थिए। सन् २०१५ मा गएको नेपालको भूकम्पपछि जसरी जापानले सहयोग र सदभाव दर्साएको थियो त्यस्तैगरी कुमामोतोको भूकम्पमा पनि नेपालीले सहयोग गरेका थिए र उनीहरुले जापानले पु¥याएको सहयोगको सराहना पनि गरेका थिए। यसरी यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिमा पनि दुई देशका सरकार र जनताका बीचमा भएका सहृदयी सदभावका यी उदाहरणहरुले पनि नेपाल र जापानको सम्बन्ध पारस्परिक सहयोग र सम्मानका साथ अघि बढेको प्रमाणित भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ।
पूर्वाधार विकास, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै नेपालको विकासका प्रयासहरुमा जापानले एक प्रमुख दाता राष्ट्रका रुपमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको त विदितै छ। विकसित विश्व परिवेशमा नेपालका उद्यमीहरुले जापानी लगानी, प्रविधि र प्राविधिक सहयोग नेपालमा कसरी आकर्षित गर्न सक्लान्? नेपाली उद्यमीहरुको यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि जापानी दूतावासले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ?
नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै बंगलादेशको भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा उहाँले व्यापारमा सन्तुलन तथा व्यापार वृद्धिका लागि यस क्षेत्रमा भएका व्यवधानहरु हटाउनुका साथै पूर्वाधारको विकास र बजारमा सहज पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। म यस विचारप्रति पूर्णरुपमा सहमत छु। म भन्न चाहन्छु कि नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न पनि यस्तै वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ। नेपाली उद्यमीले पनि लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणबाट जापानी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्छन् र त्यस्तो अनुकूल वातावरण बनाउन नीतिगत व्यवस्थाले ठूलो अर्थ राख्दछ। यसका लागि धेरै अवसर हुन सक्छन् र यस्तै एउटा हो सन् २०२५ मा जापान, ओसाका, कानसाईमा हुने एक्स्पो २०२५। नेपालले पनि सहभागिता जनाउने यस एक्स्पो पनि नेपाली उद्यमीका लागि अवसर हुन सक्दछ। यो एक्स्पो नेपालले आफ्नो समृद्धि र खुशी विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने एउटा उपयुक्त अवसर पनि हुनसक्छ।
जापानले नेपाललाई निकै लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ। जापानले नेपाललाई कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, सुशासन, शान्ति निर्माण तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। यसका साथै नेपालका सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पनि जापानले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ। यहाँ पैसाको कुरामात्र होइन कि जापानले नेपाललाई प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ किनभने राष्ट्र निर्माणको काम वास्तवमा मानवीय स्रोतको विकासबाट नै शुरु हुन्छ भन्ने विश्वास जापानले राख्दछ। यस हिसाबबाट पनि नेपालको एक असल मित्रराष्ट्रका हैसियतबाट जापानले विगत लामो समयदेखि नेपाललाई सहयोग पु¥याउँदै आएको छ।
कोभिड–१९ को महामारीले विश्वभर नै रोजगारी, आर्थिक अवसरमा व्यापक क्षति पुग्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाको पहुँचमा असर पुगेको छ। जापान सरकारले नेपालजस्ता मुलुकलाई कसरी सहयोग पुर्‍याउने सोचिरहेको छ?
यी प्रत्यक्ष सहायताबाहेक जापानले कोभिड(१९ बाट सिर्जित अन्य विषयमा नेपाललाई सहयोग गर्दैछ। उदाहरणका लागि, हामीले नेपालको खाद्य सुरक्षामा विश्वखाद्य कार्यक्रममार्फत सहयोग गरिरहेका छौं। यस कार्यक्रमबाट प्रदेश १ र २ का जोखिममा परेका जिल्लामा मातृ तथा बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३४ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरिएको छ।
आउँदा दिनहरुमा जापानले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिनेछ। प्रमुख सात औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी) र क्वेड (जापान, अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया) का सदस्य मुलुकले निम्न प्रतिबद्धता छन्ः
– समूह सातका रुपमा हामी कोभिड(१९ लाई परास्त गर्न मिलेर कार्य गर्नेछौँ
– हामी सुरक्षित, पहुँचयोग्य रुपमा सस्तो र प्रभावकारी खोप उत्पादन र विस्तार गर्न तथा त्यसको समतामूलक पहुँचका लागि मिलेर कार्य गर्न प्रतिबद्ध छौँ, र आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्र बनाउन र विश्व स्वास्थ्यलाई लाभ पुर्‍याउने छौँ।
– हामी हाम्रो राष्ट्रको मेडिकल, वैज्ञानिक, वित्तीय, म्यानुफ्याक्चरिङ र ढुवानी, र विकास क्षमतालाई एकीकृत गर्नेछौं र सुरक्षित एवं प्रभावकारी खोप वितरणको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन एउटा खोप विज्ञ कार्यसमूह स्थापना गर्नेछौँ।
भविष्यमा नेपाल र जापानबीच के कस्ता क्षेत्रमा सहयोग हुनेछन्? दुवै देशले दिगो साझेदारी कसरी विकास गर्न सक्लान?
सहयोगको एउटा प्रमुख क्षेत्र समाजको पुनर्निर्माण नै हुनु पर्दछ जुन प्राकृतिक विपदाबाट जतिसक्दो चाँडो पुनर्पाप्ती हुनेछ, र यो “बिल्ड ब्याक बेटर” (बलियो निर्माण)को अवधारणामा आधारित हुनेछ। उदाहरणका लागि, घर र विद्यालयको बलियो संरचना बनाउन सकिए यो प्रभावित समुदायका लागि निकै प्रभावकारी हुनेछ र त्यसले उनीहरुलाई जीवन सहज हुनुका साथै अघि बढ्न सक्षम तुल्याउने छ। मैले माथि भने झैँ, यस्ता प्राकृतिक विपदको हामीसँग साझा अनुभव पनि छन्।
यसबाहेक, जापानले सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार, जलविद्युत् र पानी, स्वास्थ्य प्रणाली र शिक्षामार्फत नेपालको आर्थिक विकासमा मद्दत गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि, सिन्धुली राजमार्ग (बीपी राजमार्ग) को निर्माणले मानिसको दैनिक जीवनका साथै सामानको ढुवानीमा निकै सहजता ल्याएको छ। स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको राम्रो पहुँचका लागि हामीले नेपाल सरकार र स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ।
खानेपानीका सन्दर्भमा, मेलम्चीको पानी अन्ततः यही मार्च २८ तारिख आइतबारका दिन काठमाडौँ आइपुगेकामा मलाई धेरै खुशी लागेको छ। जापान सरकारको लगानीमा सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माण सम्पन्न हुनु मेलम्ची आयोजनाकै एक सफलता हो। यस आयोजनालाई सफल बनाउन एशियाली विकास बैंक र अन्यले पनि लगानी गरेका छन्। जापानले प्लान्ट निर्माणमा करीब रु पाँच अर्ब ८० करोड ६० लाख ९करीब पाँच अर्ब ४९ करोड ४० लाख जापानी येन उपलब्ध गराएको छ जसले प्रतिदिन आठ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधन गर्न सक्नेछ। मेरो आशा छ, मेलम्ची नदीबाट आउने सफा पानीले काठमाडौँवासीको दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउनुका साथै जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ।
हामीले के बुझेका छौँ भने लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा नेपाल प्रयत्नशील रहेको छ र जापानले पनि सुशासनका लागि नेपालसँग मिलेर कार्य गरिरहेको छ। सन् २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुक (एलएलडीसी)बाट माथि जाने नेपालको लक्ष्यलाई जापानले प्रोत्साहित र मद्दत गर्न चाहेको छ, र नेपाल सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा रुपान्तरण हुनेछ। यो कार्य नेपाल सरकारको गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम मार्फत हासिल गर्न सकिने छ।
वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन निकै चुनौतीपूर्ण विषय हुन् जसलाई हामी अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमेत सबै मिलेर सम्बोधन गर्नु पर्नेछ। उदाहरणका लागि, विश्वव्यापी तापमानका सन्दर्भमा नेपाल एक्लो छैन, र हिमाली हिमनदीको मुलुक नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट अछुतो छैन। अर्को उदाहरण, शहरी क्षेत्रमा वायुको गुणस्तर पनि छलफलको विषय हुन सक्दछ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी ट्राफिक कम गरेर वायुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ र यसमा पनि जापानले काम गरिरहेको छ। मैले भन्नैपर्छ, यस्ता समस्या सुल्झाउन सकिए भावी पुस्ताको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिने छ।
जापान र नेपाल दुवै मुलुकका लागि जनता(जनताबीचको ओहोरदोहोर पनि एउटा निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो जसबाट एकअर्कालाई अरु बढी बुझ्न सकिन्छ र हाम्रो दिर्घकालीन साझेदारीलाई थप अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्नेछ। जापानको शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि जारी छ जसबाट धेरै नेपाली प्राज्ञिक वर्गले जापानमा पढ्ने अवसर पाएका छन् भने नेपाली निजामती सेवाका युवा कर्मचारीका लागि जापानी ग्राजुएट स्कुलमा जाइका मार्फत जेडीएस (मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति परियोजना) पनि सञ्चालनमा छ।
हामीले एलुम्नाई मार्फत नेपाली समाजका धेरै क्षेत्रमा पुगिरहेको योगदानलाई पनि यहाँ प्रशंसा गर्न चाहन्छौं। जापानबाट अनुभवप्राप्त यी व्यक्तिले जापानलाई आफ्नो दोस्रो घर सम्झिरहेका हुन्छन्। विद्यार्थी आदानप्रदानका अलावा सन् २०१९ मा अर्को नयाँ अवसर सिर्जना भएको छ । नेपालीका लागि जापान सरकारले ‘विशिष्टीकृत दक्ष कामदार’ कार्यक्रममा समेटेको छ जसबाट नेपाली दक्ष व्यक्तिले जापानमा गएर काम गर्न पाउने छन्।
गएको वर्ष हामीले सगरमाथा आरोहणमा पहिलो जापानीले आरोहण गरेको स्वर्ण वर्षगाँठ मनाएका थियौं। जापानी आरोही उमुरा नाओमी र मात्सुरा तेरुओले यो सफलता हासिल गर्नु भएको थियो र फुकुशिमा निवासी महिला जुन्को ताबेईले सगरमाथा आरोहण गरेको पनि ४५ वर्ष पुगेको छ। उहाँ सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वकै पहिलो महिला आरोही बन्न सफल हुनु भएको थियो। कोभिड(१९ मा सुधार भएलगत्तै हामीहरु धेरै नेपालीलाई जापानमा स्वागत गर्न चाहन्छौं, ताकि उहाँहरुले जापानी संस्कृतिका साथै परम्परागत खाना “वाशोकु” को स्वाद लिन पाउनु हुनेछ। त्यस्तै, धेरै जापानी पर्वतारोही र यात्रा गर्न रुचि राख्ने व्यक्ति पनि नेपालको भ्रमण गर्न प्रतिक्षारत छन्।
जापानमा नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ? के यसअघि तपाईं नेपाल आउनुभएको थियो? कुनै स्मरणयोग्य क्षण छ?
सन् २००५ मा तत्कालीन अधिराजकुमार पारस शाह र अधिराजकुमारी हिमानीलाई जापानको आइची एक्स्पो २००५ मा स्वागत गरेको थिएँ। राजकुमारी हिमानीले मलाई दिनुभएको काठले कुँदिएको कलाकृति मेरो घरमा अझै सजिएको छ। त्यही शैलीको एउटा गहना यहाँ जापानी राजदूतावासको कार्यालयमा पनि पाएको छु।